LG G8X ThinQ hadda waxaa laga iibsan karaa Spain | Androidsis
Laba bilood ka hor, intii lagu jiray IFA 2019 ee Berlin, LG G8X ThinQ ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay. Taleefankan, horaan uga hadalnay, waa dhamaadka-sare sare ee sumadda Kuuriya. Taleefan loo soo bandhigay inuu yahay bedelka G8 oo si rasmi ah loo soo bandhigay horraantii sanadkan. Laba bilood ka dib, qaabkani wuxuu yimid Spain.
Iibinta magaca Kuuriyada Koonfureed hoos ayey udhacday sanadahaan. In kasta oo ay sii wadayaan inay nooga tagaan aaladaha xiisaha leh, sida tan LG G8X ThinQ, qiimahoodu aad buu u sarreeyaa, taas oo shaki la’aan dhibaatooyin u keenta markay tahay helitaanka iib wanaagsan.
Qaabkani wuxuu u taagan yahay qalabkiisa, kaas oo u oggolaanaya inuu yeesho shaashad labaad, taas oo noqon karta mid aad u xiiso badan marka la ciyaarayo ciyaaraha. Tan LG G8X ThinQ horeyba waa loogu iibiyaa Spain. Isticmaalayaashu way awoodaan hadda ka iibso MediaMarkt iyo El Corte Inglés, inkasta oo la rajaynayo in dhowaan ay suurta gal ka noqon doonto dukaamada kale.
Akhbaarta wanaagsan ayaa ah in taleefanka horeyba ula yimid qalabkiisa oo ay ku jiraan, kaas oo siinaya shaashad labaad. Marka waan helnay. Warka xun ayaa ah in qiimaha uu sarreeyo, sidii caadada u ahayd, maadaama ay ku timid qiime dhan 949 euro suuqa Isbaanishka.
Qiimahani waa wax samayn kara LG G8X ThinQ dhibaato la kulanto markay tahay guul suuqa. In kasta oo ay tahay taleefan aad u dhammeystiran marka la eego qeexitaannada, sida aan ku arki karnay soo bandhigideeda rasmiga ah, adeegsadayaal yar ayaa diyaar u ah inay bixiyaan qaddarkan.
Waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la arko qaabka suuqa Isbaanishka Waxay ka jawaabaysaa soo saarista LG G8X ThinQ iyo haddii ay runti tahay iyo in kale waa iibiyaha ugu fiican. Waraaqda waxay ku leedahay wax kasta oo ay ka farxiso isticmaaleyaasha, laakiin qiimaheeda ayaa ka soo horjeeda. Maxaad u maleyneysaa taleefankan ka yimid nooca Kuuriya?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » LG » LG G8X ThingQ waxaa si rasmi ah looga bilaabay Spain
Snapdragon 865 ayaa la soo bandhigi doonaa horaanta bisha Diseembar
Hal maalin ayaa ka hartay Xilliga 10 iyo cusbooneysiinta cusub oo leh khariidad cusub oo ku jirta PUBG Mobile